Uhlahlo-lwabiwo-mali lweziseko | News24
UHLAHLO-lwabiwo-mali lwango-2018/2019 lufikelela kwi-R67 yezigidi, nengaphantsi nge-R1,689 yesigidi okanye u-2,43% kunohlengahlengiso lohlahlo-lwabiwo-mali.
Oku kuzakuxhaswa ngezibonelelo ezisuka kurhulumente kwanemali ekhoyo ngaphakathi.
“Ndiyafuna ukugxininisa ukuba, okokuqala kwiminyaka emininzi, lo masipala usebenzisa eyakhe imali kwaye edibanisa nemali yesibonelelo ukunyusa ingxowa yeziseko ukuze siqiniseke ukuba siqhuba uhlahlo-lwabiwo-mali olayame kwabo bahluphekayo.
IDAMA LELINDLE LASE-SEA VISTA
Elona phulo likhulu kolu hlahlo-lwabiwo-mali lweziseko luya kumsebenzi weminyaka wokuphucula idama lelindle laseSea Vista, apho umasipala azakusebenzisa i-R18,5 yezigidi ngonyaka ka-2018/19.
Lo msebenzi uzakuncedisa nokuza neziseko ezingundoqo ezidingwayo ukuvulela ukwakhiwa kwezindlu ezintsha zeRDP kule ngingqi.
IZINDLU ZANGASESE ZAMABHAKETHI
Ibhunga laseKouga liye lazimisa ukuba lizakubeka phambili ukupheliswa kwamabhakethi kule minyaka mithathu izayo.
USodolphu uHoratio Hendricks uthe oku kuphezulu eluhlwini kwIsicwangciso Sophuhliso Olunxulumeneyo (IDP) lukamasipala, kukwalikhathaza kakhulu iBhunga.
“Ngaphezu kwama-4000 ezindlu zisaxhomekeke kwizindlu zangasese zamabhakethi. Oku akwamekelekanga, kwaye sizakuthi siqalise inkqubo yeminyaka yokuphelisa le nkqubo yamabhakethi ngo-2018/19. Kubekwe i-R2,3 yezigidi ukumilisela le nkqubo kunyaka wokuqala.
“Eli dabi lizakuqhuba nakweminye iminyaka engaphaya kolu hlahlo-lwabiwo-mali kwaye luzakuhlala phezulu kuluhlu lwalo masipala de kususwe elokugqibela ibhakethi, litshiswe, lingaphindi lisetyenziswe kwakho.
UKUPHUCULWA KWEMPILO EMATYOTYOMBENI
Ukufakelwa kombane ngokungekho mthethweni ngomnye wemiceli-mngeni emininzi kwiindawo zethu zasematyotyombeni ezindinga ukulandelwa msinya.
IBhunga laseKouga linenjongo yokuncothula nengcambu, ngokwezigaba, lengozi yombane ofakelwa ngokungekhomthethweni, kule minyaka mithathu ilandelayo.
Ukufakelwa kombane ngokungekho mthethweni kuzisa ingozi enkulu kwiintsapho, ingakumbi kubantwana abangenakuzinceda,” utshilo uSodolophu waseKouga uHoratio Hendricks.
“Yiloo nto sizakusebenzisa isigidi seerandi kwimali yethu ukufakela umbane kwiindawo ekuvame khona ukufakelwa kombane ngokungekho mthethweni, phezu kwe-R8,8 yezigidi esizifumene kwisibonelelo i-INEP sokufakelwa kombane kumaphulo angoku nasezayo ezindlu.”
“Kukwabekwe ama-R500 000 ecaleni okufakela iimpompo zamanzi kwakunye nokulungiswa kweendlela ematyotyombeni. Sele sithenge ama-700 emigqomo enamavili ukuzama ukuphucula ukususwa kwenkunkuma kwezi ngingqi.”
Umasipala waseKouga uzakuchitha imali engange-R1,5 yesigidi ekombeni imingxuma yamanzi kunyaka-mali omtsha.
USodolophu uHoratio Hendricks uthe ukufikelela ekunikeni bonke abahlali isiqinisekiso samanzi yinto ewuhluphayo umasipala ngenxa yembalela etsala ixesha elide.
“Sele senze amanyathelo amakhulu kulo nyanka udluleyo ekombeni imingxuma yamanzi elishumi, nasekuhambiseni amatanki amanzi emvula angama-70 kwiindawo ezigqaliweyo eGamtoos Valley.
“Nanjengoko umthamo wamanzi usezantsi kakhlu, sithanda ukubacela abahlali ukuba bagcine ukusebenzisa kwabo amanzi kumthamo wama-50 eelitha umntu ngamnye,” utshilo.
Ukuphuhliswa kweendawo zamangcwaba ezimbini eLoerie naseThornhill.
Ukuze silwe nokumoshwa nokonakaliswa, zizigidi ezintathu ezibekelwe ecaleni ukuze kubiyelwe impompo yelindle eLoerie, oovimba bamanzi eJeffreys Bay naseKruisfontein, amangcwaba, iipaka zeekharaveni kwakunye neendawo zeenkampu.
I-R4,3 yezigidi ibekelwe ukuphuculwa nokubiyelwa kwebala lezemidlalo, kugxilwe kuWadi 1 no 2.
I-6,5 yezigidi izakusetyenziselwa ukutshintsha iinqwelo ezingasasebenziyo.